Gargaartoo maamiloo tarreewwan ammeetti dabala. Amaloota gargaartoo kee ifteessi, sana booda qabduu kana cuqaasi
Amalootni gargaartoo ammee gargaartoo filatameef fayyada. Yoo barbaadde, gargaartoo maqaa garaagaraa jalatti olkaa'uu dandeessa.
Gargaartota fayyadamuu barbaade fili.
Gargaaroo filatameef kofa naannawaa galchi.
Halluu qabxii jalqabaa gargaartoo fili.
Halluu qabxii dhuma gargaatoof fili.
Qaaqa osoo hin cufiin gatii foyyaa'e ykn filatame fayyadama.